DA-7 A3-Standard configuration 1.Constant Height Head အဆုံးသတ် - Fixed height head end သည်လူနာ၏ ဦး ခေါင်း၊ လည်ပင်းနှင့်ရင်ခေါင်းတို့ကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်စေသည်။ 2.Split Side Rails: 4pcs PP ဘေးထွက်ရထားများသည်လူနာအားရေတံခွန်များမှကာကွယ်ပေးသည်။ 3. ဖယ်ရှားနိုင်သောမွေ့ယာပလက်ဖောင်း - မွေ့ရာပလက်ဖောင်းသည်ဖင်နိုလစ်ဗဓေလသစ်ပျဉ်ပြားဖြစ်ပြီးလွယ်ကူစွာဖယ်ရှား။ ပိုးကင်းရန်လွယ်ကူသည်။ မွေ့ရာပလက်ဖောင်းသည်နောက်ကျောဘုတ်အတွက် X-Ray ပြုလုပ်နိုင်ပြီးလူနာ၏ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်သည်။ 4.Central သူနာပြုထိန်းချုပ်မှု ...
DA-7 A2-Standard configuration 1.Constant Height Head အဆုံးသတ်: Fixed height head end သည်လူနာ၏ ဦး ခေါင်း၊ လည်ပင်းနှင့်ရင်ခေါင်းတို့ကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်စေသည်။ 2.Split Side Rails: 4pcs PP ဘေးထွက်ရထားများသည်လူနာအားရေတံခွန်မှကာကွယ်မှုပေးသည်။ ခြေစွပ်ဘုတ်အနီးရှိအပို ၂ ခုပါဘေးထွက်သံလမ်းများသည်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးပြီးလူနာ၏ရပ်တည်မှုတွင်အထောက်အပံ့လည်းပေးသည်။ 3.Integrated အကြေးခွံစနစ်: ခြေဘဝါးအောက်၌ရှိသောအိပ်ယာထဲရှိအကြေးခွံများအားထိန်းချုပ်သောနေရာမှသက်ရောက်မှုများမှကာကွယ်သည်။
DA-7 A1-Standard configuration 1.Split Side Rails: 4pcs PP ဘေးထွက်သံလမ်းများသည်လူနာများအားရေတံခွန်များမှကာကွယ်ပေးသည်။ ခြေထောက်ဘုတ်ပြားအနီးရှိအပို ၂ ခုပါထပ်ဆောင်းသံလမ်းများသည်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ 2.Integrated အကြေးခွံစနစ်: ခြေဘဝါးအောက်မှာတည်ရှိပြီးအိပ်ရာထဲရှိအကြေးခွံထိန်းချုပ်မှု panel ကိုသက်ရောက်မှုများမှကာကွယ်ထားသည်။ 3. ဖယ်ရှားနိုင်သောမွေ့ယာပလက်ဖောင်း - မွေ့ရာပလက်ဖောင်းသည်ပလတ်စတစ်ပြားများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လွယ်ကူစွာဖယ်ရှား။ ပိုးကင်းစေရန်လွယ်ကူသည်။